Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo socdaal lama filaan ah ku tagay Asmara | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo socdaal lama filaan ah ku tagay Asmara
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta socdaal lama filaan ah ku tagay magaalada Asmara ee dalka Eritrea.
Socdaalkiisa Asmara ayaa ku soo aaday labo sano kaddib booqashadiisii u horeysay uu ku tagay Eritrea, isla markaana dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal, kaddib 20 sano oo colaad ah.
Madaxweynaha Eritrea Isais Afwerki ayaa ku soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha Asmara wafdiga uu hoggaaminayay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy.
Booqashadiisa Asmara ayaa ku soo aaday, iyadoo Itoobiya ay ka jiraan qalalaase siyaasadeed iyo rabshado dad fara badan ku dhinteen oo ka dhashay dilkii Fanaankii caanka ahaa ee reer Oromo Haacaaluu Hundeesa.
Itoobiya ayaa xilligan ka jira xaalad siyaasadeed oo cakiran, iyadoo rabshadihii dhowaan dhacay loo xirxiray dad fara badan oo ay ku jiraan xubnaha ugu waa weyn ee mucaaradka sida Jawar Mohamed.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo socdaal lama filaan ah ku tagay Asmara was last modified: July 18th, 2020 by Admin
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo gaaray Cadaado
Kudhawaad 3,500 Ardey oo maanta u fadhiistey Imtixaanka Shahaadiga Dugsiyada sare deegaanada KGS
Akhriso:- (Qormo kooban ) Hadii uu Jawaari guuleysto ama laga adkaado
Dowladda Puntland oo war ka soo saartay doorashooyinka dalka